မွေးကင်းစနှင့် ကလေးငယ်လေးတွေမှာ လေဖြတ်ခြင်းကို ဘယ်လိုစစ်ဆေးတွေ့ရှိနိုင်မလဲ - Hello Sayarwon
လေဖြတ်ခြင်းဟာ မွေးကင်းစအပါအဝင် ကလေးငယ်များမှာပါ ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပြီး ဦးနှောက်ကို ထိခိုက်စေတဲ့အတွက် မသန်မစွမ်းဘဝကို ရောက်သွားစေနိုင်ပါတယ်။ လေဖြတ်ခြင်းကို ကာကွယ်ဖို့ ခဲယဉ်းပေမယ့် လျင်မြန်စွာသိရှိပြီး အစောတလျင်ကုသပေးခြင်းအားဖြင့် နောက်ဆက်တွဲပြဿနာတွေကို လျှော့ချပေးနိုင်ပါတယ်။ ကလေးငယ်များမှာ ဖြစ်တတ်တဲ့ လေဖြတ်ခြင်းဝေဒနာကို ဘယ်လိုစစ်ဆေးတွေ့ရှိနိုင်မလဲဆိုတာကို ကြည့်ကြရအောင်။
ရောဂါနောက်ကြောင်းရာဇဝင်ကို ပြန်လှန်စစ်ဆေးခြင်းအားဖြင့် လေဖြတ်ဝေဒနာ ခံစားရနိုင်ချေရှိမရှိကို ဆရာဝန်က ကြိုတင်ခန့်မှန်းကြည့်နိုင်ပါတယ်။ ဆရာဝန်၊သူနာပြုတွေနဲ့ အခြားသော ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေဟာ အောက်ပါမေးခွန်းတွေက မေးပါလိမ့်မယ်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာ ထူးထူးခြားခြား ဘာတွေဖြစ်ခဲ့သလဲ။
မိခင်ရဲ့ ရောဂါရာဇဝင် ဘာတွေရှိသလဲ။
မိဘတွေနဲ့ ဆွေမျိုးတွေရဲ့ ရောဂါရာဇဝင်ကရော ဘယ်လိုလဲ။
ကလေးရဲ့ ရောဂါရာဇဝင်မှာ ဘာတွေရှိသလဲ။ ဘယ်လို ရောဂါတွေဖြစ်ဖူးသလဲ။ ကူးစက်ပိုးဝင်တာ ဒါမှမဟုတ် ထိခိုက်ဒါဏ်ရာ ရတာတွေ ဖြစ်ဖူးသလား။
ကလေးရဲ့ ရောဂါလက္ခဏာတွေက ဘာတွေလဲ။
ကလေးရဲ့ ပုံမှန်အမူအကျင့်တွေက ဘယ်လိုရှိသလဲ။ ဒီအမူအကျင့်တွေကနေ ပြောင်းလဲမှုရှိရင် ဆရာဝန်ကို ချက်ချင်းအကြောင်းကြားပါ။
ဦးနှောက်အား ပုံရိပ်ဖော်စစ်ဆေးခြင်း (CT/MRI)
ဓါတ်ရောင်ခြည်သုံးပြီး စစ်ဆေးရတဲ့ computed tomography scan (CT Scan) ဒါမှမဟုတ် သံလိုက်စက်ကွင်းသုံးပြီး စစ်ဆေးရတဲ့ magnetic resonance imaging scan (MRI)ကို အသုံးပြုဖို့ ဆရာဝန်က ညွှန်ကြားပါလိမ့်မယ်။ ဒီလို စစ်ဆေးခြင်းအားဖြင့် ဦးနှောက်တစ်ရှူးတွေရဲ့ အခြေအနေအပါအဝင် ခေါင်းထဲမှာ ရှိတဲ့ သွေးတွေ၊အရည်တွေရဲ့ စီးဆင်းမှုအနေအထားကိုပါ သိရှိနိုင်ပါမယ်။ ရိုက်ကူးစစ်ဆေးထားတဲ့ ဦးနှောက်ပုံရိပ်ကို ကြည့်ရှုပြီးချိန်မှာတော့ လေဖြတ်ခြင်းဟာ သွေးခဲခြင်းကြောင့် ဖြစ်တာလား ဒါမှမဟုတ် သွေးယိုစီးခြင်းကြောင့် ဖြစ်တာလားဆိုတာကို သိရှိနိုင်မှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ တခါတလေမှာလည်း ဒီလိုမျိုး ပုံရိပ်ဖော်စစ်ဆေးဖို့အတွက် အထူးပြုလုပ်ထားတဲ့ ဓါတုဗေဒပစ္စည်းတမျိုးကိုလည်း အသုံးပြုရတတ်ပါသေးတယ်။ အဆိုပါ ဓါတုဗေဒဆေးရည်ကို အသုံးပြုခြင်းအားဖြင့် ပိုမိုကြည်လင်ပြတ်သားတဲ့ ပုံရိပ်တွေကို ရရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
သွေးဆဲလ်ပမာဏ၊သွေးခဲစေသော စနစ်ကောင်းစွာ အလုပ်လုပ်ခြင်း ရှိမရှိ၊ကူးစက်ပိုးဝင်ရောက်ခြင်း ရှိမရှိ ဒါမှမဟုတ် အခြားသော ကိုယ်တွင်းဓါတ်ပစ္စည်းများ ပြဿနာရှိမရှိ စတာတွေကို သွေးစစ်ခြင်းကနေ သိရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒါဆိုရင် လေဖြတ်ခြင်းရဲ့ အကြောင်းရင်းခံကို တွက်ဆနိုင်ပါမယ်။ သင့်ကလေးအနေနဲ့ သွေးစစ်ဆေးခြင်းတမျိုးထက် ပိုလိုကောင်းလိုပါမယ်။
ဦးနှောက်ထဲမှာရှိတဲ့ သွေးကြောတွေရဲ့ အခြေအနေကို သွေးကြောဓါတ်မှန်ရိုက်ခြင်း အကူအညီနဲ့ သိရှိနိုင်ပါတယ်။ အထူးစီမံထားတဲ့ ဓါတုဆေးရည်တမျိုးကို သွေးကြောထဲ ထိုးသွင်းပြီး X-rays ဓါတ်ရောင်ခြည်အသုံးပြုကာ သွေးကြောတွေရဲ့ ပုံရိပ်ကို ရိုက်ယူပါတယ်။ ဒါဆိုရင် သွေးကြောတွေထဲမှာ သွေးစီးဆင်းမှုအခြေအနေကို လေ့လာနိုင်ပြီး ပြဿနာတစုံတရာရှိနေရင်လည်း စစ်ဆေးသိရှိနိုင်ပါမယ်။
အက်ကိုးအသံလှိုင်းသုံးပြီး ပုံရိပ်ဖော် စစ်ဆေးခြင်း
အက်ကိုးအသံလှိုင်းသုံးပြီး ပုံရိပ်ဖော်စစ်ဆေးခြင်းဟာ လှုပ်ရှားနေတဲ့ နှလုံးရဲ့ ပုံရိပ်တွေကို ဖော်ပြပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒီလို ဖော်ပြပေးခြင်းအားဖြင့် သွေးခဲခြင်း၊ကူးစက်ပိုးဝင်ခြင်း ဒါမှမဟုတ် နှလုံးရဲ့ သွင်ပြင်လက္ခဏာဆိုင်ရာ ပြဿနာတွေကို စစ်ဆေးဖော်ထုတ်နိုင်မှာပါ။ အဆိုပါ ပြဿနာတွေဟာ လေဖြတ်ခြင်းရဲ့ ရေသောက်မြစ်တွေ ဖြစ်နေနိုင်ပါတယ်။
အထူးပြုလုပ်ထားတဲ့ အချပ်အပြားလေးတွေ/သတ္တုငုတ်တိုင်လေးတွေကို လူနာရဲ့ ရင်ဘတ်မှာ ကပ်ပြီးစစ်ဆေးခြင်းအားဖြင့် နှလုံးကနေ လွှတ်ထုတ်နေတဲ့ လျှပ်စစ်အချက်ပြမှုအခြေအနေတွေကို သိရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒါဆိုရင် လေဖြတ်ခြင်းကို ဦးတည်နေတဲ့ နှလုံးစည်းချက်ပြဿနာတွေ ရှိမရှိ သိနိုင်ပါမယ်။
ဒီစစ်ဆေးမှုမှာတော့ အထူးပြုလုပ်ထားတဲ့ အချပ်အပြားလေးတွေကို ကလေးရဲ့ ဦးရည်ပြားပေါ်မှာ ကပ်လိုက်ပါမယ်။ ပြီးရင် ဒီအချပ်လေးတွေဆီက ထွက်လာတဲ့ ဝိုင်ယာကြိုးစကို အထူးပြုလုပ်ထားတဲ့ စက်တမျိုးနဲ့ ဆက်သွယ်ပါမယ်။ ကလေးငယ်ရဲ့ ဦးနှောက်လှိုင်းတွေဟာ အဆိုပါ စက်မှာ ပေါ်လာမှာဖြစ်ပြီး လေဖြတ်ခြင်းရဲ့ လက္ခဏာတခု ဖြစ်နိုင်တဲ့ ဦးနှောက်တွင်း လျှပ်စစ်လှိုင်းများ အလွန်အကျွံလှုပ်ရှားခြင်းဆိုတဲ့ အခြေအနေကို ထောက်လှမ်းသိရှိနိုင်မှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
တကယ်လို့ သင့်ကလေးမှာ လေဖြတ်ဝေဒနာနဲ့ ဆင်တူတဲ့ လက္ခဏာတွေ တွေ့နေရပြီဆိုရင် အရေးပေါ်ဆေးကုသမှုကို အမြန်ဆုံးခံယူဖို့ အရေးတကြီး လိုအပ်လှပါတယ်။ ဆေးရုံရောက်တဲ့အခါ ဦးနှောက်ကို ပုံရိပ်ဖော်စစ်ဆေးခြင်း၊သွေးစစ်ခြင်းတို့ အပါအဝင် အခြားသော လိုအပ်တဲ့ စစ်ဆေးစမ်းသပ်မှုတွေကို ပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပြီး လေဖြတ်ခြင်းဟုတ်မဟုတ်ကို ဆုံးဖြတ်ပေးပါလိမ့်မယ်။
A family guide to pediatric stroke.
http://www.heartandstroke.ca/-/media/pdf-files/canada/other/a-family-guide-to-pediatric-stroke-eng.ashx. Accessed May 22, 2017.
Pediatric stroke. http://www.hopkinsmedicine.org/healthlibrary/conditions/nervous_system_disorders/pediatric_stroke_22,PediatricStroke/. Accessed May 22, 2017.
http://www.childneurologyfoundation.org/disorders/stroke-in-children/. Accessed May 22, 2017.
https://www.stroke.org.uk/sites/default/files/childhood_stroke.pdf. Accessed May 22, 2017.
လေဖြတ်ခြင်း၏ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ထိရောက်မှု